Red Hat Enterprise Linux 8 Na-abanye Beta na ọtụtụ ndozi na Ndozi | Site na Linux
Uhie okpu Enterprise Linux 8 abata beta na ọtụtụ fixes na ndozi
Red Hat Inc. ekwuputala odiadi nke beta version nke gị na-abịa Uhie okpu Enterprise Linux 8, nke ga-adị maka ịzụta oge ọzọ n'afọ ọzọ.
Red Hat Enterprise Linux 8 bụ isi ihe na mmalite nke nkesa a dabere na Linux, ọ na-ekwe nkwa ọtụtụ atụmatụ ọhụụ na ọtụtụ ndozi, gụnyere mgbatị siri ike nke koodu ahụ, nke sistemụ ga-enwe ike ịnye ndị ọrụ ya ntụkwasị obi na nchekwa ka ukwuu.
Nke a bụ ihe ọhụụ na Red Hat Enterprise Linux 8
Nnukwu ozi na Red Hat Enterprise Linux 8 gụnyere echiche ọhụrụ akpọrọ Ntinye Ngwa iji mee ka izipu ohere ndị ọrụ dị mfe na ngwa ngwa. Uhie okpu na-eme ka o doo anya na echiche a agaghị enwe mmetụta na nkwụsi ike usoro.
Red Hat Enterprise Linux 8 ga-ewebata mmelite Linux mepere emepe maka ihe ntanetị site na ihu IPVLAN, nchịkọta TCP / IP ọhụrụ nke nwere njikwa maka mkpọchi bandwidth na BBR, yana nkwado maka usoro nchekwa OpenSSL 1.1.1 kachasị ọhụrụ yana NJ 1.3.
Na nchekwa, Red Hat Enterprise Linux 8 na-ekwe nkwa iji melite cryptography site na itinye usoro iwu niile. Ọ ga-enwe nkwado maka LUKSv2, yana NBDE (Network Bound Disk encryption) iji nye nchekwa data siri ike.
Ndị debanyere aha ha na okpu nwere ike ịnwale Red Hat Enterprise Linux 8 Beta site na nbudata ihe ntinye echichi site na ọnụ ụzọ gọọmentị nke nkesa. Ezumike nwere ike ibudata ya na ihu ọha beta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Uhie okpu Enterprise Linux 8 abata beta na ọtụtụ fixes na ndozi
Ndị omekome nwetara NSA ngwaọrụ na-aga n'ihu na-emetụta kọmputa
PhotoFilmStrip: ngwa maka vidiyo site na onyonyo